Translator Profile: AUNG PAING SOE (aungsoe) | TM-Town
Health & Research Experienced Translator
health, health education, medical (health care)
Born and raised in Myanmar(Burma),amedical doctor with >5yr in the non-profit sector. Started translation of training materials, questionnaires and research documents as part of work. Also have good experiences in subtitling, transcribing, and general/medical translation asafreelancer.
Public health has been described as "the science and art of preventing disease, prolonging life and promoting health through the organized efforts and informed choices of society, organizations, public and private, communities and individuals." ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပညာရပ်ဆိုသည်မှာ လူမှုအသိုက်အဝန်း၊ အသင်းအဖွဲ့များ၊ အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့များ၊ ရပ်ရွာလူထုအဖွဲ့များနှင့် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီတို့၏ အသိပညာဖြင့်ရွေးချယ်မှုများပြုလုပ်နိုင်ခြင်းနှင့် ယင်းတို့၏ စနစ်တကျစုပေါင်းအားဖြင့် ရောဂါကာကွယ်ခြင်း၊ အသက်ရှည်ရှည်နှင့် ကျန်းမာချမ်းသာစွာ နေထိုင်နိုင်ရေးတို့နှင့် ပတ်သတ်သည့် သိပ္ပံပညာရပ်တစ်ခု ဆိုနိုင်ရုံမျှမက၊ အနုပညာရပ်တစ်ခုပါ ဖြစ်သည်။
It is concerned with threats to the overall health ofacommunity based on population health analysis. လူထု၏ကျန်းမာရေးကို စိစစ်တွေ့ရှိမှုများအရ ပြည်သူထူထုတစ်ရပ်လုံး၏ ကျန်းမာရေးကို အဘက်ဘက်မှ ခြိမ်းခြောက်နေသည့် အကြောင်းရင်းတို့နှင့်လည်း ဆက်စပ်နေပါသည်။
The population in question can be as small asahandful of people or as large as all the inhabitants of several continents (for instance, in the case ofapandemic). ပြည်သူလူထုဟုဆိုရာတွင် လက်တစ်ဆုပ်စာ လူဦးရေပမာဏအထိ သေးငယ်နိုင်ပြီး၊ ကမ္ဘာ့တိုက်ကြီးများတွင် နေထိုင်လျက်ရှိသော လူအားလုံးပါဝင်သည်အထိ အရေအတွက် များပြားနိုင်ပါသည်။ (ဥပမာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများတွင် ကူးစက်ရောဂါတစ်မျိုး ဖြစ်ပွားသည့်အခါမျိုးတွင် ဖြစ်သည်။)
Public health has many sub-fields, but typically includes the interdisciplinary categories of epidemiology, biostatistics and health services. ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဘာသာရပ်တွင် များစွာသောဘာသာရပ်အခွဲများ ရှိသော်လည်း ယေဘုယျအားဖြင့် ရောဂါပြန့်နှံ့သက်ရောက်ပုံလေ့လာခြင်း၊ ဇီဝစာရင်းအင်းပညာနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများ စသည့် ပညာရပ်အမျိုးအစားခွဲများစွာ ပါဝင်ပါသည်။
Environmental health, community health, behavioral health, and occupational health are also important areas of public health. ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေး၊ လူထုကျန်းမာရေး၊ အပြုအမူဆိုင်ရာကျန်းမာရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေး စသည်တို့မှာလည်း ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဘာသာရပ်၏ အရေးကြီးသောနယ်ပယ်များ ဖြစ်ကြပါသည်။
The focus of public health interventions is to prevent and manage diseases, injuries and other health conditions through surveillance of cases and the promotion of healthy behavior, communities, and (in aspects relevant to human health) environments. ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သတ်သည့် ဆောင်ရွက်ချက်များ၏ ဦးတည်ချက်မှာ ကျန်းမာစွာနေထိုင်သည့်အပြုအမူ၊ ကျန်းမာသည့်လူထုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် (လူသားတို့၏ ကျန်းမာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်) ကျန်းမာစွာနေထိုင်နိုင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတို့ ဖြစ်ပေါ်လာမှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန်နှင့် ရောဂါအနာတို့ကို ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ကုသခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းများနှင့် အခြား ကျန်းမာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့်အခြေအနေ စသည်တို့ကို စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်း စသည့်ဆောင်ရွက်ချက်များ ဖြစ်ကြသည်။
Its aim is to prevent health problems from happening or re-occurring by implementing educational programs, developing policies, administering services and conducting research. ယင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပညာပေးအစီအစဉ်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးမူဝါဒများ၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် ကျန်းမာရေးပြဿနာများ ဖြစ်ပွားခြင်း သို့မဟုတ် နောက်တစ်ဖန်ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းတို့ကို ကာကွယ်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
In many cases, treatingadisease or controllingapathogen can be vital to preventing it in others, such as during an outbreak. မြောက်များစွာသော ကိစ္စရပ်များကိုကြည့်ပါက ကပ်ရောဂါတစ်ခုအသွင်ဖြစ်ပွားနေသည့်အခါမျိုးတွင် ရောဂါပိုးမွှားတစ်မျိုးကို ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် ရောဂါတစ်ခုကို ကုသခြင်းတို့သည် အသက်တမျှအရေးပါ,ပါသည်။
Vaccination programs and distribution of condoms to prevent the spread of communicable diseases are examples of common preventive public health measures, as are educational campaigns to promote vaccination and the use of condoms (including overcoming resistance to such). ဥပမာဆိုရသော် ကူးစက်တတ်သည့်ရောဂါများ ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုမှ ကာကွယ်နိုင်ရန် ကွန်ဒုံးများဖြန့်ဝေခြင်းနှင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးအစီအစဉ်တို့မှာ အတွေ့ရများသည့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ကြပြီး၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်နှင့် ကွန်ဒုံးအသုံးပြုရန် (ထို့သို့အသုံးပြုရန် ပညာပေးခြင်းကို ဟန့်တားနေသည့်အတားအဆီးများကို ကျော်ဖြတ်ခြင်း အပါအဝင်) ပညာပေးကမ်ပိန်းများအနေဖြင့်လုပ်ဆောင်ကြသည်။
2012 MD at University of Medicine
Message AUNG PAING SOE